I-Sitchmaps / i-Global Mapper, guqula imifanekiso ukuya kwi-ecw okanye i-kmz-i-Geofumadas
I-Sitchmaps / i-Global Mapper, guqula imifanekiso kwi-ecw okanye kmz
NgoJuni, 2011 Iiphotography, Google umhlaba / imephu
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndathetha nge-georeferencing Ikhutshwe imifanekiso esuka kwiGoogle Earth, usebenzisa i-kml njengenkcazo xa usolula. U vavanyo IMapper Global Ndiyaqonda ukuba eli nyathelo zinokuphetshwa ukuba ukwehlisa ifayile yongqanianiso xa download umfanekiso, ngokungalindelekanga nathi nako ukukhonza ukuguqula kwenye ifomati ezifana ECW leyo ayisindi kwaye angalahlekelwa umgangatho okanye KMZ nje umfanekiso.
1. Khuphela ifayile yokulinganisela
Ngenxa yoko, ngexesha lokukhuphela umfanekiso, kuyimfuneko ukhetha ukuba ifayile igcinwe kwifomathi ye-Global Mapper.
Xa ukukhuphela umfanekiso, kwirekhodi efanayo kuya kugcina ifayile, enegama elifanayo lomfanekiso kunye nokwandiswa .gmw
2. Vula umfanekiso
Ukuyivula kwi-Global Mapper, senza Ifayile> Vula iifayile zeDatha ...
Asiyi kukhetha umfanekiso .jpg kodwa kwifayile ye .gmw, umfanekiso wesigxina uya kuziswa.
Ingqalelo kuwe, ngaphandle kokuba siza kusebenza kunye neendawo zokulungelelanisa, umfanekiso kufuneka utshintshwe kwi-projection ngoba xa ukhupha kwiGoogle Earth ifika kwi-Latitude / Longitude kunye neDatum WGS84.
Le Datum WGS84 esebenzisa iGoogle iyafana ne-ETRS89 esetyenziswa eYurophu okanye iClake 1866 esiyisebenzisa eMelika.
Kodwa mhlawumbi sifuna ukuyihambisa kwiDatum eyahlukileyo, njengokuba kunjalo kwi-ED50 okanye i-NAD 27 efana ngokufanayo kwaye ixhaphake kakhulu eMelika).
3. Shintsha ukubonakala komfanekiso
Oku kwenziwa ngo:
Kwiphepha Projection Uyasiphakamisa ipaneli efana neboniswa kumfanekiso:
Ukuba sifuna ukudlulisela inkqubo eprojekthi senza kuyo combobox Projection.
Kule meko sinomdla wokufudukela kwi-UTM. Emva koko sakhetha indawo, iDatum kunye neeyunithi.
Unokunika kwakhona ikhowudi ye-EPSG ngokuthe ngqo, layisha ifayile yepr.prj eyayisetyenziswa rhoqo neArcView 3x okanye .aux sele ine-xml isakhiwo kwiinguqulelo ezintsha ze-ESRI. Nokuba unesinye ifayile eyakhiwe nge-xml nodes kwenye inkqubo ungayilayisha ngokusebenzisa i-.txt extension
Emva koko sicinezela iqhosha Appy. Kwinqanaba lomgangatho ophantsi kufuneka siqaphele utshintsho.
3. Thumela ngaphandle kwi-ecw
Kule Mephu ye-Global Map ayigodli, kuba ukudlulisa imifanekiso ukuya kwifom .ecw yinto eninzi iiprogram. Ngenxa yokuba i-Erdas, kufuneka ube negunya lakho, kwimeko apho Microstation iinguqulelo zeV8i zenza oko.
Ifayile> Thumela iRaster / ifomathi yesakhiwo ...
Qaphela ukuba ungatshintshela kumafomathi bhinqa, kunye ne-Idrisi, iTIFF okanye i-Erdas img.
A umfanekiso ecw kunokuba luncedo kakhulu yosebenziso CAD / inkqubo GIS kodwa ukuba babiza Google Earth akwenzeki ngaphandle kokuba georeferenced yoziswa Global Mapper siya kumazwe angaphandle KMZ equlethe umfanekiso.
4. Thumela umfanekiso ukuya kwi-kmz
Ngokuqhelekileyo siye saqonda nge-kml ifayile ye-vectorial equle imigca, amanqaku okanye iipolgoni, ezilinganisa i-kb ezimbalwa kuphela.
Kwimeko kumazwe KMZ inkqubo iqala ukwenza inani bophindo apho yinxalenye umfanekiso ziqwempu kwaye wenza isalathisi kwi-KML, ezifana kuvulwa KMZ e Google Earth ezisa lo mfanekiso.
Ukubona oko kungaphakathi kwe-kmz, ukongezwa kutshintshile kwiifom .rar / .zip ifomathi uze ungene kwifolda. Apho ungabona ukuba kukho ifayile ebizwa ngokuthi doc.kml equlethe izinto eziphathekayo kwisakhiwo sayo Mmandla kunye nomfanekiso othiwa kuhlaselwa.
Kuhle kakhulu IMapper GlobalNdibetha ukuba le nxaxheba yokugqibela ayenziwanga nayiphi na inkqubo.
Post edlulileyo«Edlulileyo BiblioCAD, khuphela i-AutoCAD ibhloko kunye nezicwangciso
Post Next Indlela yokwenza inkcazo ngokuzenzekelayo ngeMicrosoft WordOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 kwi "Sitchmaps / Global Mapper, guqula imifanekiso kwi-ecw okanye kmz"
Kuya kunyanzeleka ukuba ubone ukuba i-kmz inedatha edityaniswe kuphela kwiserver kwaye ingekho kwifayile. Ukuba kunjalo, yibhokisi ekhoyo kuphela eya kuthathwa.
xa ndigqitha kwifayile ye-google yomhlaba pro kwi-kmz ukuya kwi-mapper yehlabathi jikelele kuphela kuvela imigca ye-polygon kwaye ayisiyo ndawo yemephu, kwaye imapper iphuphuma isilumkiso apho isithi akukho nto inokunxibelelana neseva
diana paulina tejero jimenes uthi:
super cincreivle bye omo tellamas dimelo ndicela jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.teamo kwaye andikwazi
Soli Lopez uthi:
njengoko ndenzayo ukudlulisa uGoogle ukuya kuNo1, ndiyisebenzisa kwiGPS yenqwelomoya